Malaha khiyaaliga ah ee waayeelka | Suomen Mielenterveysseura
Matti waa 79 jir wuxuu bilaabay inuu ka fekero, maxay tahay sabata telefishinkiisu u ”shanqar” u bixinayaa. Gaar ahaan galbihii markuu fiirsanayo barnaamijyada Matti wuxuu dareemay in shanqartu ay sii xoogeysaneyso. Markii hare wuu la amakaagay arrintaas, laakiin markii uu wediiyay gabadhiisa wiilka qaba oo koronto yaqaan ah, sidee shanqartan loo joojin karaa, markuu wiilku fiiriyay ma arag wax haba yaraatee shanqar ah, Matti waxaa ku bilawday cabsi la yaab leh.
Siday u arkeen xigaaladu Matti wuxuu isla markiiba isu bedelay nin aamusan oo wax baqanaya. Markii ay gabadhu weydiisa siduu yahay, ma uusan siin jaabo waafi ah. Runtii Matti wuxuu sheego ma garaneyn. Galab galbaha ka mid ah mar ay gabadhu soo booqatay aabaheed waxay dareentay in uu yahay qof aad u kurbeysan. Gabadha ayaa weydiisay aabbeheed wuxuu la argagaxsan yahay. Matti isagoo hadalka hoose u dhigaya wuxuu yiri, waxaan la iiga imaanaya TV-ga marmar fariimo, oo koodh ”shanqar” xiriirsan.
Gabdhu waxay dhageysatay sheekada Matti ee ah fariimaha iyo koodhadhka, si kastooy ahaataba waxay u muuqata wax macquul ah inkastoo la rumeysan karin. Gabadha waxay bilawday iney ka fekerto, maxaa aabbo haya, sidee si buuxda oo wanaagsan uu kaligiis ugu noolaan karaa gurigiisa. Matti ma maskaxduu ka xanuunsan yahay, marba haddii uu ku fikirayo waxayaabahaas khayaaliga ah? Gabadha waxay isku dayday iney dejiso, oo waxaas uu maleeynayo in ay yihiin waxaan jirin. Runtii Matti meel uga dhac iyo caro buu qaaday, markey gabadhiisu kula talisay inuu takhtar aado.
Gabadhu waxay dareentay awood darrada aabbeheed. Waxay go’aansatay iney takhtar wacdo oo ay talo weydiiso, intastoo ay ka baqeysay inuusan cafineyn aabbeheed haddii uu ogaado. La hadalkii takhtarka ka dib gabadha waxay fahantay in qalabka farsamada casriga ay jiilka waayeelka ah u keenaan dhibaatooyin badan, sida kuwa marwalba tusaale ahaan daawada televishinka noloshooda oo idil. Xaqiiqdii Matti waxaa yaab geliyay codkan cusub ee ka imaanaya TV-ga markuu daawanayo.
Wuxuu kaloo takhtarku weydiiyay, miyay jiraan jir ahaan meel Matti laga hayo, taasoo u keeneysa dhibaato. Mararka qaarkood dadka waayeelka ah jirkooda waxaa ka jiri kara cillad. Gabadha sidey u aragto waxba ma jiraan, marka laga reebo maqalka oo liciif ah iyo awoodiisa dhaqdhaqaaq oo yaraatay. Takhtarka wuxuu sheegay, in dadka waayeelka ay leeyihiin malayaal kaladuwan oo khayaali sahlan ah waana mid caadi ah oo xitaa waxaa leh dhallinyarada tusaale ahaan, sida marka shey muhiim ah ka lumo. Shakigu wuu sii kordhaa da’da waayeelnimada, mana aha wax dhib ah oo la xiriira dhimirka. Khayaaliga muuqda dardiis way habbonaan lahayd in kaalmo daawo la helo. Maadaama uusan rabin, Matti uma habboona in la geeyo waaxda daryeelka caafimaadka dhimirka, haddii uusan markaa nafsadiisa ama tan dadka kaleba khatar ku ahayn.
Takhtarku wuxuu kula taliyay gabadha in Matti ay kala sheekeeysato waxyaabahaas khayaaliga ah oo ay xoogga saarto in badan sheekada gudaheeda, ilaa iyo inta Matti ka dareemayo arrimahaas. Muranka diididda xaqiiqahaanta ma aha inta badan mid meel gaaraya. Tilmaamidda fahamka dareenka, sida tusaale ahaan in la yiraa ”Waxaa wax layaab leh, Marka TV-kaaga shanqar bixiyo. Aniga xataa waa ka baqi lahaa.”, inta badan wey caawisaa. Daryeel inuu helo Matti wey u fiicnaan lahayd, sababtoo ah uma fiicna cabsidan joogtada ah oo xadideeysa nololmaalmeedkiisa.
Gabadha waxay go’aansatay in hal habeen aabbaheed la joogto, bal si ay u ogaato ”shanqarta” iyo fariimaha aabbe helo. Fiidkii si wadajir ah ayay u daawanayeen TV-ga oo waxa timid ”shanqar” layaab leh, kadib markii Matti dheereeyay codka TV-ga si uu u maqlo barnaamijka si fiican. TV-ga duqa ah dheereenta codka ma laha tayo. Marka Matti uma baahneyn inuu maqli shanqarta TV-ga. Waxay go’aansadeen in Matti loo raadsho samaacadaha deggaha.
Gabadha weli welwel ayay ka qabtaa Matti rumeysnaanta la xiriirta in uu fariimo ka helo dayaanka telefishinka. Waxay bilaawday iney kala hadasho aabbaheed iyadoo soo bandhigeysa welwelka ay qabto, waxayna sheegtay iney ogaatay in Matti uu marmar kacsan yahay welwelsan yahayna sababtana ay tahay daawashada telefishinka oo uu badsado iney arrinta la xiriirto. Marka Matti uma qaadanin inuu la eedeenayo, wuu ogolaaday muddo kadib, in arrimahaas yihiin kuwa isaga welwelka ku haya.
Gabdha waxay tiri, runtii takhtarka wuxuu kaa caawin karaa welwelkaas, haddii ay booqdaan oo ay la hadlaan. Gabadha intaas waxay raacisay iney rajeyneyso, in aabbe helo nolomaalmeed fiican oo aan lahayn welwelka TV-ga keeney oo takhtarkuna hindiso habkasta oo welwelka iyo deggenaansho la’aanta yareen lahaa.
Takhtarka daawo ayuu u qoray Matti, taasoo Matti waxoogaa ka cagajiiday, laakiin wuxuu ogaaday muddo kadib in waxayaabibihii la yaabka lahaa ay ka yaraadeen. ”Kuwaas wax dhib ah ma leh”, Matti mardambe ayuu xaqiiqsaday daawada. Xiriirkii takhtarkana xitaa wuxuu noqday mid kalsooni leh oo uu markan awoodo inuu u sheego takhtarka wixii soo maray. Tan waxay yareeysay welwelkiisii oo ballamihii dambe si wanaagsan ayay u dheceen.